सडक छेकेर कार्यक्रम गरे ३ वर्ष कैद ! | Jukson
सडक छेकेर कार्यक्रम गरे ३ वर्ष कैद !
फागुन २६, काठमाडौं : सडक ढाकेर जुलुस, र्‍याली वा अन्य कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ ? सावधान, जेल पर्नुहोला! सरकारले सडक आवागमन अवरोध पुर्‍याउनेलाई कारबाहीका लागि ऐन निर्माण तयारी अघि बढाएको छ।
व्यवस्थापिका संसद्ले तयार पारेको ‘फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक-२०७१’ मा सडक अवरोध वा आवागमन बाधा पुर्‍याउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद, ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधायन समिति सदस्य रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार उक्त विधेयक संसदको विधायन उपसमितिबाट पास भई समितिमा आइसकेको छ। 'छरिएर रहेका ऐन फौजदारी कानुनलाई एकीकृत गर्ने काम गरिरहेका छौँ,' सांसद भण्डारीले भने, 'उक्त विधेयक पारित भएपछि कसैले सडक अवरोध गरे कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ।' उनका अनुसार सम्भवत: उक्त विधेयक चैत दोस्रो साताभित्रै संसदबाट पारित हुनेछ।
सभापति देउवाबाट दुःख व्यक्त
सडकमा झाडु लगाउने बनिन् चर्चित मोडल
कस्तो चले ‘मिस्टर भर्जिन’, ‘ब्ल्याक’ र ‘जय शम्भु
पोखरा राइनोज्मा ३ विदेशी खेलाडी अनुबन्धित